Lumbini KhabarNews Portal Of Lumbini | ५० वर्षपछि फेरि प्रचण्ड–सीताको बिहे ! - Lumbini Khabar
५० वर्षपछि फेरि प्रचण्ड–सीताको बिहे !
काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहे गरेको ५० वर्षपछि पुनः बेहुला बन्नुभयो । २०२६ साल वैशाख २६ गते आजैका दिन अध्यक्ष प्रचण्ड र सीता पहिलाे पटक विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएको थियो ।
विवाहको ५० औँ वर्षगाँठका अवसरमा बिहीबार पुनः दोस्रो पटक विवाह भएको हो । पुत्र प्रकाशको निधनपछि श्रीमती सीताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ ।
श्रीमती सीताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार आउन सक्ने अपेक्षासहित चिकित्सककै सल्लाहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पचासौँ वर्षगाँठसँगै दोस्रो पटक विवाह गर्नुभएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
प्रचण्डसँगै श्रीमती सीता पनि बेहुलीकै साडीचोलोमा सजिनु भएको थियो । तर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राम्रोसँग उभिन नसक्दा छोरी रेणु दाहालले सघाइ रहनुभएको थियो । समारोहमा दुवै जनाले एक आपसलाई माला पहिर्याउँदै विवाहको रीत पूरा गरेका थिए ।
२०२६ सालमा हतार हतारमै विवाह भएको भए पनि अहिले देशका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा दुवै जनाको पुनः विवाह भएको हो । समारोहका लागि खुमलटारस्थित निवास सिँगारिएको थियो ।
२०७४ मंसिर ३ गते छोरा प्रकाश दाहालको निधन भएपछि विक्षिप्त बन्नुभएकी सीताको मन मन भुलाउन विवाह गरिएको हो । स्वास्थ्योपचार गर्न केही सयमअघि मात्रै अध्यक्ष प्रचण्ड सीतालाई लिएर अमेरिका पुग्नुभएको थियो । सीताकै आग्रहमा दोस्रो पटक विवाह गरेको प्रचण्डले समारोहमा बताउनुभएको थियो ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, सरकारका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।